Naya Post Nepal | टिकटकमा मुु’ठ्ठी ठो”क्काएर गरिबलाई पैसा बाड्ने गिविना, के छ उनको यति ठू’लो आ’यस्राेत ?
टिकटकमा मुु’ठ्ठी ठो”क्काएर गरिबलाई पैसा बाड्ने गिविना, के छ उनको यति ठू’लो आ’यस्राेत ?
टिकटकमा सेवानै धर्म हो भन्ने मन’कारी जो गरीब, दुःखीको भ’गवान भएर नि’कै भा’इरल छिन् । जो हातमा मु’ठ्ठी पा’रेर द्व’वांग हा’न्न लगाउदै सडक पेटीमा सु’त्ने भोका, गरीब र अ”सक्तलाई खु’ल्ला मनले सहयोग गर्ने ग’र्छिन् को हुन् त ती युवती ?
पोखरामा ब”सोबा’स गर्ने २४ वर्षीया गिभिना पेशा’गत रूपमा शिक्षिका पनि हुन। आफ्नो खाली रहेको स’मयमा उनले टि’कटकमा अ’रुले भन्दा भिन्नै किसिमको भिडियो ब’नाएर अप’लोड गर्छिन। भि’डियोमा उनले सड’कमा जिवन बि’ताइरहेका मानिसहरूलाई आ’र्थिक सहयोग देखि खाने कुरा तथा क’पडाहरु दिएर सहयोग गरे’को देख्न स’किन्छ ।
टिकटकमा धे’रै कि’सिमका भिडि’योहरु हेर्न सकिन्छ तर सोसल मि’डिया बाट पनि एक कि\_सिमको स’हयोग र स’न्देश दिन स’किन्छ भन्ने एउटा उ’दाहरण हुन उनी । तर उनको ब्य’क्तीबारेमा धेरै कुरा भने बा’हिरिएको छैन ।
टिकटकमा धेरै किसिमका भि’डियोहरु हेर्न स’किन्छ तर सो’सल मि’डिया बाट पनि एक कि’सिमको सहयोग र स’न्देश दिन स’किन्छ भन्ने एउटा उदा’हरण हुन उनी । तर उनको ब्य’क्तीबारेमा धेरै कुरा भने बा’हिरिएको छैन ।
यो पनि ,,काठमाडौँ । साताको पाँचौ दिन अ’र्थात आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनको भा’उ झ’न् ब’ढेको छ। बुधबार प्रतितोला ४०० रुपैयाँले ब’ढेको सुनको भाउ आज बिहीबार पनि ५०० रुपैयाँले ब’ढेको नेपाल सुनचाँदी व्यव’सायी महासंघले नयाँ पुस्तालाई जा’नकारी दिएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्य’वसायी महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सुनचाँदीको का’रोबार मूल्यका आ’धारमा दैनिक रुपमा सुन तथा चाँ’दीको कारोबार मू’ल्य तो’क्दै आएको छ।
महासङ्घले सा’र्वजनिक गरेको त’थ्याङ्कनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि बढे’को छ। आज ते’जावी सुन प्र’तितोला रु ९२ हजार रुपै’याँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार तेजाबी सुन प्रति’तोला रु ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो।
यस्तै, सुनको भाउ बढे’सँगै आज चाँ’दीको भा’उ पनि बढेको छ। म’हासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मू’ल्य प्रतितोला रु १ हजार २५५ रुपैयाँमा का’रोबार भइरहेको छ। बुधबार चाँदी प्र’तितोला रु १ हजार २३५ रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो।
२०७८ पुष ३०, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 177 Views